Dimetity 1000+ chipset ka ekwuwaara site na Mediatek | Gam akporosis
Mediatek chọrọ inwe obodo ndị ọrụ buru ibu karịa nke ọ nwere ugbu a, nke, ma e jiri ya tụnyere Qualcomm, dara ogbenye. Ndị na-azụ ahịa, yana OEM (ndị na-emepụta), mara na Qualcomm chipsets bụ ọkacha mma na arụmọrụ kacha mma-mara mma. Ya mere, ọ bụ ihe a na-ahụkarị ndị nhazi Snapdragon na smartphones karịa Mediatek chipsets, nke ebumnuche, karịa ihe ọ bụla, na obere arụmọrụ China na ọkara.
Onye na-emepụta ụlọ ọrụ semiconductor nwere atụmatụ iji dọtakwuo ndị Fans, ma otu n'ime ndị a amalitelarị site na mwepụta ọhụrụ nke SoC ọhụrụ na-atọ ụtọ, nke na-abụghị onye ọzọ Njupụta 1000+, mbipụta dị mma nke Dimensity 1000 a ma ama malitere na November afọ gara aga dịka otu n'ime nhọrọ kachasị adọrọ mmasị na nkwado maka netwọkụ 5G. Nke a na-eme mgbe Helio G85.
1 Kedu ihe Dimensity 1000+ ga-enye?
1.1 Kedu ụdị ga-ebido ya?
Kedu ihe Dimensity 1000+ ga-enye?
Mediatek weputara Dimensity 1000+
Ihe mbụ anyị ga - egosipụta banyere mpempe ọhụụ a bụ ihe na - atọ ụtọ ma pụrụ iche, karịa ihe ọ bụla, maka ọhaneze. gamer, na nke ahụl Nkwado maka 144Hz ume ọnụego ngosipụta. Nke a bụ ihe anyị na-enwetaghị na mbụ Dimensity 1000 - nke na-akwado ogwe aka ruo 120 Hz - mana nke etinyegoro ugbu a maka chipset ọhụrụ a.
Nke a hertz ọnụ ọgụgụ dị elu karịa nke ugbu a, nke bụ 60 Hz na anyị na-ahụ ya na imirikiti nke smartphones taa na fọrọ mgbe niile. Ọbụna ọ na-enye ahụmịhe ọhụụ dị nro na ịdị nro karịa karịa 90 na 120 Hz frequencies nke etinyelarị na njedebe dị taa na obere igwe mkpirisi.
Teknụzụ HyperEngine 2.0 na MiraVision, bụ ndị na-ahụ maka imeziwanye nke ọma na ngosipụta nke egwuregwu na akụkụ ndị ọzọ, adịghị ahụ anya site na enweghị ha. A na-etinyekwa nkwado HDR10 + na chipset ọhụrụ a.
Abịa na arụmọrụ, na Dimensity 1000+ adịghị iche na Dimensity 1000. Ihe nhazi ohuru a octa-isi mobile nwere anọ 77 GHz Cortex A2,66 cores, ebe nke abụọ quartet nke Agba O nwere okpukpu anọ nke 55 GHz Cortex A2. GPU bu isi Mali-G77 nke nwere isi itoolu siri ike iji mee ihe kachasi ike nke igwu egwuregwu na ichoro ihe di omimi di egwu.
Chipset a, dị ka aturu anya ma kwuo ya, nwere ike ijikọ na ntanetị 5G, otu atụmatụ ahụ nke ekwuputara Dimensity 1000 n'oge ahụ. Ihe na-adọrọ mmasị na ihe ọhụrụ anyị natara ugbu a maka otu njikọta njikọ a bụ na MediaTek enyela usoro Dual SIM 5G na nhazi ọhụrụ ya, nke pụtara na Ekwentị mkpanaka ndị na-ebu mpempe a n'okpuru mkpuchi ha nwere ike ijide kaadị SIM 5G abụọ, ihe na-agaghị ekwe omume na nke gara aga nlereanya ama aha.
Iji gbochie njikọta nkwado a site na ịmepụta ike a na-achọghị na-emetụta nnwere onwe nke batrị ekwentị. Mediatek mere ka a mara na Dimensity 1000+ na-abịa n'ụzọ nwere ike ịzọpụta ọnọdụ akpọrọ "5G Ultrasave." Ekele maka njirimara a, atụmatụ echekwara ike ruru 48%, ma e jiri ya tụnyere ngwaahịa asọmpi, ka ụlọ ọrụ semiconductor na-ekwu. A ghaghi ịgbakwunye nke a ngbanwe smart nke na-agbanwe n'etiti netwọk 4G na 5G iji gbatịkwuo ndụ batrị ahụ. Mediatek emewo ka o doo anya na SoC a anaghị akwụ ụgwọ iji nweta ọrụ ike ka mma.
Sistemụ-on-Chip dakọtara na WiFi 6, Bluetooth 5.1 na Nchịkọta Carrier. Akụkụ ikpeazụ a, na okwu dị mfe, bụ ọrụ maka ịkwalite ọsọ nke 5G. Emeputa na-ekwu na Chipset a nwere ike ịnye nbudata na bulite ọsọ ọsọ ruo 4,7 na 2,3 GB, n'otu n'otu.
Kedu ụdị ga-ebido ya?
Vivo ekwenyela na ọ ga-abụ onye mbụ amaara ama iji Mediatek's Dimensity 1000+ na otu n'ime ngwaọrụ ya na-abịa. Nke a ga-adị n'okpuru tutelage nke iQOO sub-brand, ọ bụ ezie na amabeghị ya kpọmkwem mgbe ọ ga-abata.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Mediatek ekwuputala Dimensity 1000+ chipset site na nkwado maka ihe ngosi rue 144 Hz
Huawei Y8s bụ ekwentị ọhụrụ dị n'etiti etiti gụnyere ọrụ Google